Global Voices teny Malagasy » Irakiana Mpandika Tenin’ny Tafik’i Etazonia Tafahitsoka Ao Gresy Amin’Izao Fotoana Izao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Avrily 2016 14:53 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Amerika Avaratra, Eoropa Andrefana, Etazonia, Gresy, Iràka, Syria, Tiorkia, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana
Ibrahim Esmael Ibrahim tao amin'ny garan'Idomeni, Gresy. Amin'ny maha-zatovo azy , dia niasa ho mpadika teny ho an'ny miaramila Amerikana izy tao Iraka. Sary: Filip Warwick. Nahazoana alàlana tamin'ny PRI
Ity lahatsoratra ity dia avy amin'ny Jacob Resneck  ary niseho voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 24 Martsa 2016, ary navoaka eto noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Lehilahy 26 taona manao akanjo mihaja avy any Bagdad i Ibrahim Esmael Ibrahim. Raha nifanena taminy aho, nitsangana teo amin'ny sehatra teo amin'ny gara ao Idomeni, Gresy izy – na dia tsy misy fiaran-dalamby mandeha aza eo amin'izao fotoana izao. Miteny anglisy tsara i Ibrahim; amin'ny maha-zatovolahy azy dia nahazo asa tao amin'ny GLS ( Global Linguist Solutions  ), fandraharahana iray ao Virginia nanome mpandika teny ho an'ny tafika amerikana nandritra ny ady tao Iraka.
Tsara hoy izy ny karama – 1500 dolara isam-bolana miampy tombondahiny. Ary tia azy ny miaramila ka nanome azy anaram-bosotra hoe AP. Fa rehefa enim-bolana niasana, dia nandrahona ny aiko ny mpikomy hoy Ibrahim. “Nilaza tamiko izy ireo hoe ho tapahanay ny lohanao hiala amin'ny vatanao, raha mbola mahita anao eto izahay,” hoy izy nampahatsiahy.
Nandrisika azy handao ny firenena ny fianakavian'i Ibrahim. Fa alohan'ny hialany, dia nanoratra mailaka any amin'ireo serzà Amerikana ankafiziny izy hilaza azy ireo ny zava-mitranga.
“Nilaza azy ireo ny zava-nihatra tamiko aho ary nilaza izy ireo ny mba hanomezako ny nomeraon'ny karatro any amin'ny GLS ao amin'ny Faritra Maitso ao Bagdad,” hoy izy, mitadidy ny zava-nitranga 10 taona tatỳ aoriana. “Dia nandeha tany aho ary nomeko azy ireo [ilay izy] ary ny andro manaraka dia naka fiara fitateram-bahoaka ho any Syria aho.”
Nahita asa birao tao amin'ny orinasa fifandraisan-davitra iray izy tao Damaskosy. Nefa efa nanam-paniriana izy ny ho any amin'ny anabaviny mipetraka any Etazonia. Nanamarika ny zaodahiny fa noho ny servisy nataony tao amin'ny tafika amerikana tany Iraka, dia afaka mangataka Visa Amerikana natokana manokana ho an'ny mpifindra monina izy.
Fa saingy amin'izay, dia mila manaporofo ny asany izy. Nanoratra tany amin'ny GLS izy noho izany, ilay orinasa manana fifanarahana lehibe amin'ny Pentagônina. “Tsy namaly ry zareo, tsy namaly ahy ry zareo,” hoy izy tamiko. “Nilaza izy ireo fa efa vita ny fifanarahana tamin'ny Tafika Amerikana ary tsy afaka ny hahazo ny antontan-taratasinao ianao. Tena sarotra izany. “
Nitady fifandraisana tamin'ny GLS ao Virginia ny The World an'ny PRI tamin'ny herinandro lasa ary namela hafatra maro, fa mbola miandry valiny izahay hatreto.
Nilaza i Ibrahim fa hijanona ao Syria mandritra ny taona vitsivitsy, ary avy eo hifindra any amin'ny faritra Kiorda avaratr'i Iraka izay nahitany asa hafahafa tsy ara-dàlana. Fa saingy niteny izy fa nisy ny olana amin'ny maha foko Arabo azy; ny manam-pahefana Kiorda nilaza taminy mba hiverenany any Bagdad, nefa natahotra mafy izy ny handeha.
Niampita ny sisintany ho any Torkia kosa no nataony, ary nihaona tamin'ny vehivavy Afghana tany tamin'ny 2014. Nivady izy ireo tamin'ny fomba ara-pivavahana. Hoy i Ibrahim afaka mankany Canada ravehivavy, nefa tsy afaka mitondra azy satria tsy manana fahazoan-dàlana ara-dalàna amin'ny fanambadiana.
“Irery aho. Ny vadiko any Canada ary ny anabaviko any Amerika, ” hoy i Ibrahim. Ny ray aman-dreniny any Torkia, ary niteny izy fa afaka hitondra ireo ho any Etazonia ny anabaviny ao anatin'ny volana vitsivitsy, kanefa kosa mety ho taona maro vao hahazo fahazoan-dalana ho azy.
Noho izany dia Eoropa no tiany handehanana amin'izao fotoana izao. Fa amin'ny fifanarahana vaovao ao amin'ny Vondrona Eoropeana sy i Torkia , dia tsy hinoana ho afaka hijanona ao izy. Ny Vondrona Eoropeana mikasa ny hamerina indray ireo mpitady fialokalofana toa an'i Ibrahim avy any Torkia nankany Gresy. Nanaiky i Torkia ny handray azy ireo hiverina ho takalon'ny 6 lavitrisa dolara amin'ny fanampiana sy ny fandrisihana hafa.
Nilaza ny Vondrona Eoropeana fa ny fifanarahana dia mety hanakivy ny olona amin'ny fandoavana amin'ireo mpanao trafika ny saran'ny fiampitana sy mananda ny ainy amin'ny fiampitana mampidi-doza eo amin'ny ranomasina Égée avy any Torkia ho any Gresy. Fa niteny ireo mpitsikera hoe raha misy làlana iray mihidy, dia misy hafa misokatra.
Ny ankamaroan'ny mpitady fialokalofana izay efa voasakana ao Gresy dia Syriana nitsoaka ny ady an-trano. Sary :Filip Warwick. Nampiasaina nazahoana alàlana tamin'ny RPI .
Niteny ireo manam-pahefanan'ny zon'olombelona fa tsy manaja ny maha-olombelona ny fikasana hanaovana fandroahana faobe ary mety ho fandikana ny lalàna iraisampirenena.
“Ny olona rehetra izay mitady fiarovana dia manan-jo hanana ny raharahany hodinihina tsirairay ary miankina amin'ny fahamendrehan'ilay olona izany,” hoy i Nils Muiznieks Kaomiseran'ny Zon'Olombelona ao amin'ny Vaomiera Eoropeana tamin'ny The World. Nilaza izy fa mandrahona hanipy izany fitsipika izany eny am-baravarankely ny fifanarahan'ny Vondrona Eropeana sy i Torkia.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/04/80950/
 niseho voalohany tao amin'ny PRI.org: http://www.pri.org/stories/2016-03-24/iraqi-translator-us-military-now-stuck-greece
 fifanarahana vaovao ao amin'ny Vondrona Eoropeana sy i Torkia: http://www.theguardian.com/world/2016/mar/18/eu-deal-turkey-migrants-refugees-q-and-a